Sanbaloolshe oo beesha caalamka dhaleeceeyay | jubbaland news
Sanbaloolshe oo beesha caalamka dhaleeceeyay
Oct 27, 2017 - Aragtiyood
Agaasimaha Hay’adda Nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sanbaloolshe ayaa ku dhalleeceeyey beesha caalamka, gaar ahaan waddamada US, UK iyo Qaramada Midoobay inay ka gaabiyeen inay hay’adaha amniga Soomaaliya ku caawiyaan khibrad iyo qalab farsamo si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabab.
RIIX HALKAN OO DHEGEYSO CODKA.
Agaasimaha hay’adda nabadsugidda waxa uu ku sheegay qoraalkiisa jariiradda New York Times in Soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo dhinaca khibaradda iyo qalabka iskugu jirta, iyo weliba qaab cusub oo uu yeesho iskaashiga ay leeyihiin hay’adaha amniga Soomaaliya iyo kuwa caalamka.
Sanbaloolse waxa uu muujiyey in hay’adda nabadsugidda ay caqabado ka haystaan dhinaca ka hortagga weerarrada Al-Shabab ee qaraxyada, isagoo sheegay in Al-Shabab ay si weyn u kordhiyeen isticmaalka qaraxyada iyo weliba culayska ay leeyihiin oo uu sheegay inuu ku bilowday ilaa 100 kiilo haatanna uu gaadhayo ilaa 1000 kiilo.
Waxa uu sheegay Sanbaloolshe in hay’adaha caalamka ee leh khibradda inay ka gaabiyeen inay iskaashi dhinaca wadaagista xogta ah ay siiyaan hay’adda nabadsugidda. Waxa uu sheegay in khubarada waddamada qaarkood ay yimaadaan Soomaaliya kadibna baadhitaan ay ku sameeyaan qaraxyada, balse natiijada qaraxada aysan dib ugu soo celin hay’adaha Soomaaliya.
Haddaba qodobada uu ku sheegay agaasimaha nabadsugidda ma ku sax yahay? Matt Bryden waa khabiir ka faallooda arirmaha amniga iyo istiraatijiyada gobolka Geeska Afrika, waxaana u shalay ka soo laabtay magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in hadalllada agaasimaha ay wax ka jiraan.